Akụkọ - Akwụkwọ akụkọ mberede nke Coronavirus kwụsịrị azụmahịa ụwa.
Na-aga n'ihu Nkọwa
EPS Block Nkedo Machine
Air Jụrụ Block Nkedo Machine
Agụụ Block Nkedo Machine
Kemeghi Block Nkedo Machine
EPS Ọdịdị Nkedo Machine
Ọkpụkpụ Nkedo igwe na agụụ
Energy vingzọpụta Type Ọdịdị Nkedo Machine
Central agụụ System
EPS Machinecha Machine
EPS mpempe akwụkwọ Cutting Machine
CNC Machinecha Machine
EPS CNC rawụta
EPS akpụzi na ngwa
EPS Ngwa Akụrụngwa
Akwụkwọ akụkọ mberede Coronavirus kwusara azụmahịa ụwa.
Akwụkwọ akụkọ mberede Coronavirus kwusara azụmahịa ụwa. Ọtụtụ ndị ahịa na-echegbu onwe ha na ha enweghị injinia iji wụnye ma ọ bụ mezie igwe ndị ha zụtara n'aka China. Ee, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-ebubata ngwaahịa nwere nsogbu a, mana ọ bụghị na ụlọ ọrụ anyị, n'ihi na na mgbakwunye na ndị injinia China, anyị nwekwara ndị injinia nwere ahụmahụ India, na ndị injinia Jọdan. Naanị na Nọvemba, onye injinia anyị nke India gara Yemen ịwụnye akara igwe EPS Shape. Onye ahịa ahụ zụtara usoro EPS SHAPE MOLDING MACHINE dum, gụnyere EPS BATCH PREEXPANDER, SILOS, EPS SHAPE MOLDING MACHINE, EPS MOLD NA NKWUKWU ND OTHER ỌZỌ. Ihe niile gara nke ọma n'oge echichi ahụ, na-enyere onye ahịa ahụ aka ịmalite imepụta ihe n'oge.
Yemenlọ ọrụ ndị ahịa anyị Yemen na-arụpụta brik brik brik, nke bụ isi mkpuchi mkpuchi nke brik brik bred, E-brik brik. Nke a bụ ngwaahịa a ma ama na mba Middle East. Onye ahịa Yemen nyere anyị iwu na-agaghị eleta China. Site na nkwukọrịta n'ịntanetị, anyị kọwara nkọwa EPS anyị na nkọwapụta ya, anyị gosiri ya vidiyo nke igwe EPS anyị na-arụ ọrụ, anyị kọwara ya ajụjụ teknụzụ ya niile, anyị mere nyocha nyocha ọnụahịa maka ha ka ha wee nwee ike ịme akụkọ nyocha ọ bụla. Mgbe ọnwa abụọ kwurịtara okwu, ha kpebiri ịkwado anyị. Ma n'ihi na ọ bụ oge mbụ imekọ ihe ọnụ na anyị na mgbe zutere ọ bụla ọzọ, ndị ahịa ikike a-atọ ndị ọzọ nnyocha gị n'ụlọnga inyocha niile igwe mgbe mmepụta, na-elele containers loading na saịtị. Nnyocha ahụ, site na nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ahụ iji dozie igwe ndị ahụ n'ime akpa ahụ, gafere nyocha ha nke ọma. N'ezie, ụdị nyocha nke ndị ọzọ abụghị oge mbụ maka anyị. Anyị na-anabata ndị ahịa ọ bụla ịchọta ụlọ ọrụ ndị ọzọ maka nyocha.
Dị ka onye na-ebu EPS igwe nwere ihe karịrị afọ 15 na ahụmịhe na ụlọ ọrụ EPS, dabere na echiche nke izizi na nke mbụ nke ndị ahịa, anyị na-amalitekarị site n'echiche ndị ahịa ma dozie nsogbu maka ndị ahịa. Ka anyị imekọ ihe ọnụ merie-mmeri! Anyị na-anabata ndị enyi nwere atụmatụ ịmepe ụlọ ọrụ EPS ma ọ bụ melite igwe EPS.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwe EPS, biko kpọtụrụ anyị, daalụ!
Post oge: Jan-03-2021
Adress: 140lọ 1407-1408, No.19 Jinping Road, Fuchun Street, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China 311402